CANNAPRESSO CBD E mmiri mmiri-1000mg CBD 15ml vape mmanụ - USA Cannapresso Health Inc
CBD Ike: 1000mg
Flavor: Ụtaba, Menthol, Strawberry, Cherry Mint, ahịhịa-egusi ice, Vaịn blackcurrant
Direction maka ojiji:
Wet tank ozugbo, emetụta eriri igwe ma ọ bụ ngwakọta na ọkacha mmasị vape ihe ọṅụṅụ. Tinyegharịa dị ka chọrọ, ngwaahịa mmetụta ịdị iche iche site na n'ji.
Ejila ma ọ bụrụ na ime ma ọ bụ lactating. Always ịkpọ a ọgwụ dọkịta tupu modifying oriri gị ma ọ bụ iji ihe ọ bụla ọhụrụ ngwaahịa. Ngwaahịa a abụghị ịchọpụta, na-emeso, gwọọ, ma ọ bụ gbochie ọ bụla ọrịa. Okwu a na-emeghị inyocha na nri na ọgwụ ọjọọ nchịkwa (FDA).
Osote: CBD Water 10ml 10mg CBD
Best CBD Oil n'ihi Nchegbu
Best CBD Oil N'ihi Pain
Ou Oil eji
CBD na nchegbu
CBD N'ihi Nchegbu
CBD maka Pain
CBD Oil maka ọdịdọ
Sherebaya Oil Vape
Hemp Oil N'ihi Pain
Hemp Mkpụrụ Oil
Olee otú Iji Mee CBD Oil
Ime afọ Oil
Igbo Oil Vape
CANNAPRESSO CBD E mmiri mmiri-100mg CBD 15ml vape mmanụ
CANNAPRESSO CBD E mmiri mmiri-300mg CBD 15ml vape mmanụ
CANNAPRESSO CBD E mmiri mmiri 500mg CBD 15ml vape mmanụ